Ahoana ny fivezaran'ny masonao amin'ny tranokala | Martech Zone
Ny fomba fivelaran'ny masonao amin'ny tranokala
Talata, Aogositra 5, 2014 Zoma, Febroary 10, 2017 Douglas Karr
Ho an'ny famoronana dia azoko antoka fa misy olona ao anatiny mikiakiaka azy ireo ho hafa noho izy ary tsy manangana tranokala mitovy endrika amin'ny olona rehetra. Amin'ny fomba fijery marketing, na izany aza, efa nampianatra ireo mpitsidika anay izahay nandritra ny folo taona izao ny amin'izay antenaina amin'ny tranonkala iray sy ny fomba hitetezana azy mahomby. Amin'ny maha-mpampiasa anao dia tsy misy mahasosotra loatra toy ny fiezahana hitady ny mombamomba ny fifandraisana, tsindrio miverina amin'ny pejy fandraisana, na kitiho mora foana ilay pejy rehefa tsy natao araka ny fanao maoderina.
Ao amin'ny sary eto ambany, Singlegrain dia niara-niasa tamin'i Crazy Egg hanolotra fampahalalana mahasoa momba ny fanarahana maso izay afaka manampy anao hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ao amin'ny tranonkalanao.
Ny famolavolana mamaly dia nanampy an'ity fahasarotana ity - miantoka ny haben'ny sary ho an'ny mpamorona endrika isaky ny viewport ary manome fifampiresahana izay hanindry ny ankihibe fotsiny! Izany dia mitaky pejy voahevitra tsara izay tsotra hikorisa, mahita izay ilainao, ary mamaky sy mitazona azy io.
Mety halaim-panahy hanao endrika hafa ny mpamorona anao… fa aza gaga rehefa misy fiantraikany amin'ny taham-pisondrotana sy ny fiovam-po rehefa kivy ny mpitsidika ary miala!
Tags: atody adalafihetsiky ny masofanarahana masoFahoana ny fihetsiky ny masonaomanaiky Designmpitovotranokala f
Zava-misy 10 izay hahagaga anao amin'ny haino aman-jery sosialy